အရွယ်တင်နုပျိုစေတဲ့ ကော်လဂျင်ဓာတ်ကို မြှင့်တင်ပေးမယ့် အစားအစာ (၅) မျိုး - For her Myanmar
အရွယ်တင်နုပျိုစေတဲ့ ကော်လဂျင်ဓာတ်ကို မြှင့်တင်ပေးမယ့် အစားအစာ (၅) မျိုး
ရှိရင်းစွဲအသက်ထက်နုပျိုတဲ့ပုံပေါက်အောင် ဘာအစားအစာတွေ စားရမှာလဲ??
ကော်လဂျင် (Collagen) ဆိုတာ ယောင်းကို ပိုပြီးနုပျိုတဲ့အသွင်ပေါက်စေတဲ့ ဓာတ်တစ်မျိုးပါ။ Stella တို့ရဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာအတွင်းမှာ ကော်လဂျင်ဓာတ်ကပါပြီးသားပါ။ ဒါပေမဲ့ အသက်အရွယ်ရလာတာနဲ့အမျှ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ collagen ထုတ်လွှတ်နှုန်းက နှေးကွေးလာပါတယ်။
ကော်လဂျင်ထုတ်လွှတ်နှုန်းနှေးတာများ ဘာလုပ်ရမှာလဲလို့ မတွေးလိုက်နဲ့နော်။ ကော်လဂျင်ဓာတ်နည်းလာလေလေ အသားအရေက လျော့ရဲလာပြီး အရေးအကြောင်းတွေ များလာလေလေပါပဲ။ ဟင် ဒါဆို ကော်လဂျင်ဓာတ်မလွှတ်တော့ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ? မပူပါနဲ့ အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်းကို နှေးကွေးစေပြီး အရေးအကြောင်းတွေကို ကာကွယ်ပေမယ့် အစားအစာတွေ ရှိပါတယ်။ ဒါတွေကတော့ ….
ငါးမှာ အိုမီဂါသရီးဖက်တီးအက်စစ် (Omega-3 fatty acid) တွေ ပြည့်ဝစွာပါဝင်တဲ့အတွက် အရေပြားဆဲလ်တွေရဲ့ ဘေးနံရံတွေကို ဝန်းရံထားတဲ့ အမြှေးပါးတွေကို အားဖြည့်ပေးပါတယ်။ အရေပြားဆဲလ်တွေက အားပြည့်ကျန်းမာနေသရွေ့ ယောင်းက ရှိရင်းစွဲ အသက်ထက် နုပျိုနေမှာပါနော်။
ခရမ်းချဉ်သီး၊ beetroot နဲ့ အနီရောင်ငရုတ်ပွစတဲ့ အနီရောင် ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေ၊ ဟင်းနုနယ်၊ ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်းစတဲ့ အစိမ်းရင့်ရောင် ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေ၊ ရွှေဖရုံသီး၊ မုန်လာဥနီစတဲ့ လိမ္မော်ရောင် ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေက နေရောင်ခြည်ကြောင့် အသားအရေပျက်စီးခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ခန္ဓာကိုယ်တွင်းမှာရှိတဲ့ ကော်လဂျင်လယ်ဗယ်ကိုလည်း မြှင့်တင်ပေးပါသေးတယ်။
အချဉ်ဓာတ်ပါတဲ့ လိမ္မော်သီး၊ ပင်မှည့်သီးတွေမှာပါတဲ့ ဗီတာမင်စီဟာ ခန္ဓာကိုယ်တွင်းမှာရှိတဲ့ အမိုင်နိုအက်စစ်ကို ကော်လဂျင်အဖြစ် ပြောင်းပေးနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်ရီသီးတွေကလည်း ကော်လဂျင်ထုတ်လုပ်နှုန်းကို မြင့်တက်စေပါတယ်နော်။
အသားတွေမှာ ယောင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်က မထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ အမိုင်နိုအက်စစ်တွေ ပါဝင်ပါတယ်။ ဒီအမိုင်နိုအက်စစ်တွေဟာဆိုရင်တော့ ယောင်းအတွက် ကော်လဂျင်အဖြစ် ပြောင်းလဲပေးနိုင်ပါတယ်။ ကြက်ဥအကာတွေမှာလည်း ကော်လဂျင်ဓာတ်တွေပါဝင်တာကြောင့် ယောင်းရဲ့နေ့စဉ်စားသင့်တဲ့ စာရင်းထဲ တစ်ခုအပါအဝင်ပါ။ သက်သတ်လွတ်သမားတွေအတွက်ကတော့ အသားနဲ့ ဥအမျိုးမျိုးအစား အစေ့အဆန်တွေကို အစားထိုးပေးနိုင်ပါတယ်။
ဂုံးမှာ ပါဝင်တဲ့ သံဓာတ်နဲ့ ဇင့်ဓာတ်စတာတွေက ယောင်းခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ကော်လဂျင် ပြန်ဖြည့်တင်းပေးတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် အရေးပါတဲ့ ဓာတ်တွေပါ။ ဂုံးမှာ ကျန်းမာရေးကို အထောက်အကူပြုတဲ့ တခြားသော ဓာတ်တွေလည်း ရှိနေပါသေးတယ်။
ကော်လဂျင်ဟင်းချိုတွေ၊ ကော်လဂျင်အားဖြည့်အချိုရည်တွေလည်း သောက်ပေးလို့ရတာမှန်ပေမဲ့ ဒါတွေက ဈေးသက်သာတဲ့ထဲ မပါတာမို့ အမြဲမသောက်နိုင်ပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ သဘာဝကပေးတဲ့ အစားအစာတွေကို များများစားပေးပြီး အရွယ်တင်နုပျိုတဲ့ အသားအရေလေးကို ပိုင်ဆိုင်ကြပါစေလို့….
ရှိရငျးစှဲအသကျထကျနုပြိုတဲ့ပုံပေါကျအောငျ ဘာအစားအစာတှေ စားရမှာလဲ??
ကျောလဂငျြ (Collagen) ဆိုတာ ယောငျးကို ပိုပွီးနုပြိုတဲ့အသှငျပေါကျစတေဲ့ ဓာတျတဈမြိုးပါ။ Stella တို့ရဲ့ ကိုယျခန်ဓာအတှငျးမှာ ကျောလဂငျြဓာတျကပါပွီးသားပါ။ ဒါပမေဲ့ အသကျအရှယျရလာတာနဲ့အမြှ ခန်ဓာကိုယျရဲ့ collagen ထုတျလှတျနှုနျးက နှေးကှေးလာပါတယျ။
ကျောလဂငျြထုတျလှတျနှုနျးနှေးတာမြား ဘာလုပျရမှာလဲလို့ မတှေးလိုကျနဲ့နျော။ ကျောလဂငျြဓာတျနညျးလာလလေေ အသားအရကေ လြော့ရဲလာပွီး အရေးအကွောငျးတှေ မြားလာလလေပေါပဲ။ ဟငျ ဒါဆို ကျောလဂငျြဓာတျမလှတျတော့ရငျဘယျလိုလုပျမလဲ? မပူပါနဲ့ အိုမငျးရငျ့ရျောခွငျးကို နှေးကှေးစပွေီး အရေးအကွောငျးတှကေို ကာကှယျပမေယျ့ အစားအစာတှေ ရှိပါတယျ။ ဒါတှကေတော့ ….
ငါးမှာ အိုမီဂါသရီးဖကျတီးအကျစဈ (Omega-3 fatty acid) တှေ ပွညျ့ဝစှာပါဝငျတဲ့အတှကျ အရပွေားဆဲလျတှရေဲ့ ဘေးနံရံတှကေို ဝနျးရံထားတဲ့ အမွှေးပါးတှကေို အားဖွညျ့ပေးပါတယျ။ အရပွေားဆဲလျတှကေ အားပွညျ့ကနျြးမာနသေရှေ့ ယောငျးက ရှိရငျးစှဲ အသကျထကျ နုပြိုနမှောပါနျော။
ခရမျးခဉျြသီး၊ beetroot နဲ့ အနီရောငျငရုတျပှစတဲ့ အနီရောငျ ဟငျးသီးဟငျးရှကျတှေ၊ ဟငျးနုနယျ၊ ပနျးဂျေါဖီစိမျးစတဲ့ အစိမျးရငျ့ရောငျ ဟငျးသီးဟငျးရှကျတှေ၊ ရှဖေရုံသီး၊ မုနျလာဥနီစတဲ့ လိမ်မျောရောငျ ဟငျးသီးဟငျးရှကျတှကေ နရေောငျခွညျကွောငျ့ အသားအရပေကျြစီးခွငျးမှ ကာကှယျပေးပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ ခန်ဓာကိုယျတှငျးမှာရှိတဲ့ ကျောလဂငျြလယျဗယျကိုလညျး မွှငျ့တငျပေးပါသေးတယျ။
အခဉျြဓာတျပါတဲ့ လိမ်မျောသီး၊ ပငျမှညျ့သီးတှမှောပါတဲ့ ဗီတာမငျစီဟာ ခန်ဓာကိုယျတှငျးမှာရှိတဲ့ အမိုငျနိုအကျစဈကို ကျောလဂငျြအဖွဈ ပွောငျးပေးနိုငျပါတယျ။ ဘယျရီသီးတှကေလညျး ကျောလဂငျြထုတျလုပျနှုနျးကို မွငျ့တကျစပေါတယျနျော။
အသားတှမှော ယောငျးရဲ့ခန်ဓာကိုယျက မထုတျပေးနိုငျတဲ့ အမိုငျနိုအကျစဈတှေ ပါဝငျပါတယျ။ ဒီအမိုငျနိုအကျစဈတှဟောဆိုရငျတော့ ယောငျးအတှကျ ကျောလဂငျြအဖွဈ ပွောငျးလဲပေးနိုငျပါတယျ။ ကွကျဥအကာတှမှောလညျး ကျောလဂငျြဓာတျတှပေါဝငျတာကွောငျ့ ယောငျးရဲ့နစေ့ဉျစားသငျ့တဲ့ စာရငျးထဲ တဈခုအပါအဝငျပါ။ သကျသတျလှတျသမားတှအေတှကျကတော့ အသားနဲ့ ဥအမြိုးမြိုးအစား အစအေ့ဆနျတှကေို အစားထိုးပေးနိုငျပါတယျ။
ဂုံးမှာ ပါဝငျတဲ့ သံဓာတျနဲ့ ဇငျ့ဓာတျစတာတှကေ ယောငျးခန်ဓာကိုယျရဲ့ ကျောလဂငျြ ပွနျဖွညျ့တငျးပေးတဲ့ လုပျငနျးစဉျအတှကျ အရေးပါတဲ့ ဓာတျတှပေါ။ ဂုံးမှာ ကနျြးမာရေးကို အထောကျအကူပွုတဲ့ တခွားသော ဓာတျတှလေညျး ရှိနပေါသေးတယျ။
ကျောလဂငျြဟငျးခြိုတှေ၊ ကျောလဂငျြအားဖွညျ့အခြိုရညျတှလေညျး သောကျပေးလို့ရတာမှနျပမေဲ့ ဒါတှကေ ဈေးသကျသာတဲ့ထဲ မပါတာမို့ အမွဲမသောကျနိုငျပါဘူး။ ဒါ့ကွောငျ့ ကနျြးမာရေးနဲ့ ညီညှတျတဲ့ သဘာဝကပေးတဲ့ အစားအစာတှကေို မြားမြားစားပေးပွီး အရှယျတငျနုပြိုတဲ့ အသားအရလေေးကို ပိုငျဆိုငျကွပါစလေို့….
Tags: Beauty, collagen, Food, Health, healthy food, healthy skin, skin, tips, youth